warkii.com » Soraj Pancholi oo wareysi laga qaaday, Salman, Sushant, Disha ayuuna kaga hadlay wareysi xiiso leh!!
Soraj Pancholi oo wareysi laga qaaday, Salman, Sushant, Disha ayuuna kaga hadlay wareysi xiiso leh!!
Jilaaga caanka ah Soraj Pancholi qaab jiliinkiisa sidaan dhan caan uguma noqonin balse muranada iyo kiisaska uu dhexda ka galaayey ayuuba si weyn caan ugu sii noqday marka loo fiiriyo sida magaciisa loo hadal hayo 7-sano udambeysay hadaba wareysi xidigaan la yeelatay Bombay Times qodobada uu kaga hadlay hoos kaga bogo:
Disha aqoon intee la eg ayaad u laheed markee nooleyd waayo waxaa la sheegay in xiriir idinka dhaxeeyay waliba uur ay qaaday.?
Soraj: waa arin aan la yaabay Disha oodhan waxaan bartay geerida Sushant kadib magac ahaan iyo muuqaal ahaan xiligaasna iyada aduunka kuma nooleyn waligey mala kulmin mana garaneynin sideen xiriir ku yeelanay waa been cad oo la iga faafiyay.
Maxuu Salman Khan magaciisa usoo dhexgalaa kiis walba oo adiga laguugu heysto maxaase noloshaada Salman soo dhexgaliyay ma runbaa inuu ku caawiyo marwalba oo dhib ku qabsado.?
Soraj: aniga xitaa midaas waan la yaabay sababta kiis walba nolosheyda ah Salman loogu lifaaqo, mudane Salman Filimkeyga kowaad ayuu ii maalgaliyay taasi kama dhigno inuu nolosheyda oodhan dushiisa saaran tahay waxaan is baranay 2012 xiligaaso uu duubaayey Ek Tha Tiger anigana filimka Director caawiye ayaan ka ahaa markaas ayuuna Sallu ii balan qaaday inuu Filim ii maal galin doono atoorena iga dhigi doono sababto ah waxuu ka helay qaabka shaqadeyda iyo kartideyda.
Marka waxaa khalad ah in Salman laga dhigo qof i difaaco marwalba waana arin uusan raali ka ahen isaga anigana raali kama ahi balse dad cadow ah ayaa sheekooyinkan been abuurka ah sameyeen.
Ma runbaa inaad isku dhacdeeb adiga iyo Sushant sanadkii 2017 sido kalena Salman garabkaada istaagay aadna u cabsi galiseen Sushant.?
Soraj: waa been abuur weyn sheekadaas hada kahorna saxaafada waan la wadaagay arinkaas mida kale Sushant isaga ayaaba ila kulmay markii la faafiyay arinkaas waxuuna yiri,”walasl beenta nalaga faafiyay ma maqashay fadlan adiga ayaa beenin kara ee ka hadal sido kale Salman usheeg in aan aniga beri ka ahay sheekadan” waayo Sushant inuu aniga ila dagaalay ayaa sheekada laga dhigay sidaas ayuuna iiga codsaday inaan aniga beeniyo warka waana beeniyay saxaafadana waan la hadlay.
Sido kale waannla xiriiray Salman anigo fahamsiiyay in Sushant waxba ka ogeyn sheekadan dadkalena faafiyeen.
8-sano udambeysay kiisas waaweyn ayaa laguugu eedeyay ee magacaada maxuu muranka saaxiib ula yahay marwalba arinkaas ma is weydiisay.?
Soraj: dhab ahaantii wali kama soo kabanin murugadii kiiskii Jia Khan oo dusha la iga saaray hooyaded ilaa hada maxkamada inee hor timaado ayaa la sugayaa oo ay cadeyn horkeento maadama aniga damaanad banaanka ku joogo 7-sano udambeysay sifiican ayaan ula shaqeeyay CBI.
Marwalba oo saldhiga la iiga waco si wax la iiweydiyo deg deg ayaan ku tagaayey xitaa hadaan xanuunsanahay oo xumad (qandho) daran iheyso anigoo kiiskaas murugtiisa iheyso ayee labo kale iigu dareen (Sushant iyo Disha).
Dhanka kale Aditya Pancholi oo ah Soraj aabihiis waxuu yiri asna. “Soraj ayaa uureyay Disha kadibna Sushant ayaa arinkaas Soraj kula dagaalay sababtaas aawged ayuuna Soraj u dilay Sushant isagoo garab ka helaayo Salman waa sheeko qaab filim ah oo kale oo agaasimay balse wiilkeyga isagaaba murug hore heyse hadii beri uu naftiisa wax yeeleyyo yaan u qabsana ileen labo kiis horleh ayaa dusha laga saaray.
” wax walbo waa laga filan karaa inuu ku dhaqaaqo Waxaan codsanayaa in cadaalada la horkeeno dadkii warkaas alifeen waxaan kaloo codsanaa kiisaska Sushant iyo Disha in CBI la wareegto si xaqiiqada jirta loo wada ogaado waana ka xunahay qoys ahaan geerida Sushant iyo Disha iyagoo da’yar dunida ka tageen.”